आईपीएल कपाल हटाउन कसरी काम गर्दछ? तपाईंको उत्तर यहाँ छ। - उद्योग समाचार-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड।
आईपीएल कपाल हटाउन कसरी काम गर्दछ? तपाईंको उत्तर यहाँ छ।
समय: 2019-11-19 हिट्स: 4
वर्षौंको लागि, आईपीएलका कपाल हटाउनु भनेको ती चिनारीहरूको लागि एक गोप्य कुरा मात्र हो - जो कसुर गर्दै सैलुन जाने सेटको बीचमा गोलहरू बनाउँदछ। अब त्यो फुसफुसाई कराई अधिक छ। आईपीएल टेक्नोलोजीको साथ अब घर प्रयोगका लागि उपलब्ध छ, हामी धेरै नयाँ यो नयाँ कपाल हटाउने समाधानको बारेमा चर्चा गर्दैछौं जुन तपाईंलाई एक पटकमा हप्ताहरूको लागि सहजता प्रदान गर्दछ। वास्तवमा, लाखौं महिलाले यसलाई पहिले नै प्रयोग गरिसकेका छन्। त्यसोभए आईपीएल भनेको के हो?
हामीले नोबल होम आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण बनाउने थिएनौं यदि हामी पूर्ण रूपमा निश्चित हुँदैनौं कि आईपीएल कपाल हटाउने भविष्य हो। अब त्यो भविष्य यहाँ छ - र यसको साथ, तपाईंको सबै सबै जटिल प्रश्नहरूको उत्तर। आईपीएलले कसरी काम गर्छ? आईपीएल कसले राम्रोसँग काम गर्छ, र यो कस्तो देखिन्छ? आईपीएल कपाल हटाउन के फाइदा छन्? एक नजर हेरौं
आईपीएल कपाल हटाउने के हो?
आईपीएलको अर्थ इन्टेन्स पल्स्ट लाइट टेक्नोलोजी हो। होम आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणले कपालको जरामा हल्का कोमल दालहरू प्रयोग गर्दछ। यसले कपाललाई यसको विश्राम चरणमा जान बाध्य पार्छ: केश तपाईं बाहिर झर्नुभएको छ, र बिस्तारै तपाईंको शरीर पनि त्यस क्षेत्रमा कम कपाल बढ्दछ।
त्यो सहजता पनि लामो समय सम्म रहन्छ। १ 14 बर्षको अनुसन्धानको परिणाम, नोबल होम आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण पहिलो चार उपचार पछि कपालबाट स्वतन्त्रताको एक ठूलो op पूर्ण हप्ता। यो कि त केवल खुट्टाको लागि मात्र होइन: स्मार्ट वक्र एट्याच्मेन्ट संलग्नहरू तपाईंलाई पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ र सुरक्षित ढ your्गले तपाईंको अन्डरआर्मस, बिकिनी क्षेत्र र अनुहारको उपचार गर्न। त्यसैले आईपीएल वास्तवमै शेभर, मोम उपचार वा इपिलेटरहरूको ठाउँ लिन सक्दछ।
जब उपचारको तालिका अनुसरण गर्दा खुट्टाहरू मापन गरिन्छ, व्यक्तिगत नतिजा भिन्न हुन्छन्।
आईपीएलले कसरी काम गर्छ?
त्यसो भए उत्तर दिन्छ कि 'आईपीएल के हो?' - अब विवरण को लागी। आईपीएलले कपालमा मेग्निन भनिने रment्गको लागि धन्यवाद काम गर्दछ: धेरै गर्मीको दिन कालो पाना जस्तै, मेलानिनले कपाललाई फ्ल्यासबाट प्रकाश अवशोषित गर्न मद्दत गर्दछ, यसले विश्राम चरणमा जान प्रेरित गर्दछ। यसले तपाईंलाई चिल्लो, कपाल-मुक्त छालाको साथ छोड्छ।
त्यसो भए, तपाईं कसरी घरमा आईपीएल कपाल हटाउने गर्नुहुन्छ? नोबल होम आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो छ:
कपाल हटाउनको लागि दाढी, एपिलेट वा मोम क्षेत्र। यदि तपाइँ एपिलेट वा मोक्सको लागि छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको उपचार गर्नु अघि एक दिन यो सुनिश्चित गर्नुहोस्।
तपाईंको छाला टोनको लागि सही प्रकाश गहनता चयन गर्नुहोस्।
नोबल होम आईपीएल कपाल हटाउने भक्तिहरू खोल्नुहोस्, र 'फ्ल्यास फ्ल्यास' लाईटको लागि पर्खनुहोस्।
'फ्ल्यास' बटन थिच्नुहोस्।
अर्को स्थानमा जानुहोस्!
Lower. home मिनेट भन्दा कम समय लाग्छ तपाईको तल्लो खुट्टा नोबेल गृह आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणको साथ। एक पटक कपाल पछाडि बढ्न रोक्दछ, तपाईं दाह्री चरण को बाहिर र तपाईं घर छाला सुन्दर बनाउनको लागि घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जानुहोस् बाट सकारात्मक परिणामहरू हेर्न, नोबेल घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् प्रत्येक दुई हप्ताहरूमा पहिलो चार उपचारका लागि। त्यस पछि तपाईले प्रत्येक --- हप्तामा मात्र माइनर टच अप गर्नु पर्छ
अघिल्लो: कपाल हटाउन उत्तम तरिका - आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण
अर्को: कसरी लेजर कपाल हटाउने को साथ अनुहार कपाल हटाउने